Ukuhlolwa intsha - yindlela enhle ukuba nginqobe ubunzima kwenkathi yenguquko
Ikhaya Nomkhaya, Intsha
Kukholakala ukuthi usakhula, uvame ukubizwa ngokuthi inkathi zesikhashana - siyisinqumo esinzima kunazo zonke. Lokhu akusona isimanga. Ngemva yokuguqukela kwesinye isimo ngokushesha cishe kuzo zonke izici zokuphila ayisekho ingane kodwa ayikakabi umuntu omdala. Iqala sokuthomba kokuba ukucabanga kuqala okuphathelene nocansi, e umzimba zineminyaka isiphepho hormone. Kodwa, hhayi kuphela umzimba - ingemuva ngokomzwelo iba engazinzile kakhulu, kukhona ukukhathazeka, ukungahlaliseki, ukuzwela ngokweqile futhi sengozini. Futhi imizamo ukwakha yayo, ngaphandle umzali, umbono, avame ukuba buhlungu ngempela.
Zonke lezi zinguquko zingase asithinti ukuziphatha kanye nombono wonke futhi uthanda ingane. Ngakho, nezikhathi isici isimo sokucindezeleka, futhi ngezinye izikhathi - ukucindezeleka, yacabanga ukuzibulala nemvelo, bazilahla ukubukeka wakhe omusha, kokwesaba aliwa ontanga yabo, ukungabi umdlandla wekufundza kanye nesifiso sokuzivumelanisa bagomela ngokwaso ngaso sonke isikhathi izindlela eyamukelekayo. Lezi iphuzu izingxenye isimo singawathola kancane ngaphezulu noma kancane kancane, kodwa noma kunjalo, zihlale khona. It kuvela ukuthi intsha - isikhathi esingcono wokuphila, entathakusa yayo - eqinisweni, emnyama kanye abadliwa yangaphakathi ukuntengantenga inkathi? Yiqiniso, akuyona. Kukhona ngakolunye uhlangothi lwemali - ezicini ezinhle, ezifana freshness ukukhanya okuvelayo kanye nemizwelo ehlukahlukene, "nezamylennost" Umbono, abayilangazelela ngenjabulo injabulo.
Indlela yokubhekana imiphumela engemihle nokuvuthwa eyeve eshumini nambili? Yiqiniso, inketho ekahle - it is a ukuvakashelwa kudokotela wengqondo ngiyofuna abanekhono, ngemva kokuchitha ukuhlolwa ezidingekile intsha kuzosiza insizwa noma intokazi ukuba baziqonde bona ngokwabo kanye nezwe, ukusungula inqubo inkhulumomphendvulwano ontanga nabathandekayo babo abadala. Kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, zimbalwa kakhulu abafana namantombazane abakulungele ukuhamba ekuqokweni akho nge onguchwepheshe. Ukuze iningi lentsha, Ukuvakashela wezengqondo - yokuvuma okuthile okungavamile, futhi kungakho - ukuzibona ngiyisiphukuphuku. izinto Hhayi kangcono futhi labo bantu osemncane, obazali bakhe bawungenisa iseluleko ezifanele. Ezimweni ezinjalo, ngokushesha kuphakamisa umoya ukuphikisana, kanye nokwenqaba ikhona, ngisho nemizamo elingenacala kakhulu zokuxhumana.
Kulokhu, zonke ingane idinga ungubani. Yazi futhi wamukele ngokwakho nazo zonke ngebuhle nebubi - nansi ikhambi nezindaba eziningi ezifuywayo eziba khona phakathi nenkathi kwenkathi yenguquko. Ngenxa yale njongo, kukhona zochwepheshe nabasafunda ukuhlolwa yamahlaya ngoba intsha abangakwazi ukudlula bebodwa.
Ngokuvamile, kuqala ezandleni izinsizwa nezintombi esanda kungena isivivinyo, okuyinto inquma uhlobo Ubumnene. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi konke kulungile - sanguine, melancholic, phlegmatic futhi choleric ezifakiwe. Nazi nje phakathi kwentsha kukhona inkolelo-ze ongaziwa: sanguine kuphela - uhlobo "elihle" Ubumnene, bonke abanye - ngokuvamile unganelisekile asemasha, akuhambisani kuya kanokusho, elakhiwa ngo-izingqondo zabo. Ngakho-ke, uma ubhekene nesimo esinjena, umsebenzi abazali - ngobumnene ukuchaza ukuthi ubuntu ngamunye akhe khe sizakala!.
Yeka okuhlangenwe test ezithakazelisayo intsha ku incazelo uhlamvu. Ngokwesibonelo, uhlu lwemibuzo Shmisheka kunqophe ukulinganisa accentuation, okungukuthi, izinkomba main nokuthambekela, uhlamvu. Nalapha futhi, kukhona izingibe kancane. Iqiniso ukuthi asiqokomisa ubuntu - umbono on the esengozini kuyinsakavukela pathology. Kodwa lokhu akusho ukuthi umuntu accentuation ezithile, egula noma ogulayo ngokwengqondo maduze. Vele banake izici ezithile uhlamvu, wabaphuzisa ukuthuthukisa izinga lokuphila kwabo. Lokho incazelo enjalo balizwe intsha nabazali bazo noma abangane bakho asebekhulile.
Uma ukhathele uphendula imibuzo, ungaya ngokusebenzisa okulandelayo ukuhlolwa sokuqala Entsheni: Luscher umbala test futhi avivinye Sondhi portrait. Ungagxambukeli, futhi kutholakale izinga IQ namakhono professional (proforietatsiyu).
Kuze kube manje, i-Internet kukhona izingosi eziningi, amelela zokuhlolelwa teen amantombazane. Ngokuyinhloko, iwumphumela umdlalo izingane noma ukubhula. nkosazana esencane, ekuphenduleni uchungechunge lwemibuzo kunalokho eyinqaba, ithola incazelo lapho uqhathaniswa iqhawe movie kwakho okuthandayo noma opopayi. Nazi nje multgeroya hhayi futhi ayikwazi ngamunye kwakhiwa uhlamvu ecashile izici ezingokwengqondo - ". Ezinhle" abayikho 'okubi "noma Ngakho-ke, ukubaluleka novivinyo olunjalo okungabazekayo, futhi kungase kukuzuzise ukukhuluma mayelana nemiphumela yabo emibi ethambile psyche yobusha. Kungcono ukuba banake kokuhlolwa kwengane ukucacisa ubuntu hlobo. Namuhla kunesimo esithi asifane nasesikhathini "Ukuhlolwa kwe-teen abafana."
Kukhona poll okungalimazi. kutholakale izinga ukuzenzela, ukunakekelwa, inhlanhla, ukuzethemba, nobuciko kanye likhono lekucabanga ngalokuhlelekile, nabanye. Ukuphendula imibuzo kusuka novivinyo olunjalo, intsha baba nokuzethemba okwengeziwe ngokwabo, okuyinto yena, kuyasiza ngempumelelo unqobe izikhathi ezinzima lapho umuntu ekhula.
Izimfihlo zokuxhumana: ungakhuluma kanjani izingane, abazali, umphathi, futhi udokotela?
Izimpawu zokuthomba kubafana. Izimpawu usakhula
Ingcindezi ingane engu-12. Izinga ngoba intsha
Ukuxoshwa accountant omkhulu isicelo sakhe: kokubulawa, ukudluliswa kwamacala. Art. 80 LC RF
"Shiseido" (imoto): ukubukwa kanye nokubuyekeza
8800 Nokia Arte: ukhohlwe kahle ubudala
Bogorodskaya utshani futhi bloodroot - imithi
Njengoba ukufihla ifolda kudeskithophu (Vindovs 7)